चिसो मौसम, चरम प्रदूषण, दमबाट कसरी बच्ने ? – Health Post Nepal
चिसो मौसम, चरम प्रदूषण, दमबाट कसरी बच्ने ?
२०७५ कार्तिक २९ गते ९:२५
फोक्सो वा श्वासनलीमा आएको संकुचनका कारण श्वास–प्रश्वासमा आएको कठिनाइलाई दम भनिन्छ । यो एक दीर्घरोग हो । अक्सिजनको मात्रा रगतभित्र पस्नमा कठिनाइ हुँदा दमरोगले च्याप्ने गर्छ । दम रोगभन्दा पनि रोगहरूको लक्षण हो । यसले श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी अंगहरूमा आक्रमण गर्छ । धुलो, धुवाँ, वातावरणीय प्रदूषणलगायत कारणले यो रोग लाग्ने गर्छ । जुनसुकै उमेर समूहका मानिसमा यो रोग लाग्न सक्छ ।
श्वास–प्रश्वासका कोषिकाहरूले उत्पादन गरेको एक इन्जाइमले श्वास–प्रश्वासका नलीहरूमा बाधा उत्पन्न गराउँछन्, जसकारण लामो समयसम्म खोकी लाग्ने, स्वाँ–स्वाँ हुने गर्दछ, त्यसैलाई नै दम भएको भनिन्छ । दमले फोक्सोको हावा भित्र–बाहिर गर्ने नलीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ । यसले हावानलीमा रहेका मांसपेशीलाई संकुचित पार्ने काम गर्छ । जसले गर्दा श्वास–प्रश्वासमा समस्या आउँछ ।दमका रोगीका लागि चिसो मौसम जोखिमपूर्ण मानिन्छ । चिसोमा रगत बाक्लो हुने, नलीहरु खुम्चिने हुँदा रक्तसंचारदेखि श्वासप्रश्वाससमेत अप्ठेरो हुने भएकोले दमका रोगीका लागि जोखिम झन् बढी हुने चिकित्सकहरु बताउछन् ।
वातावरणीय प्रदूषणका कारण उत्पन्न धुलो–धुवाँले मानिसमा एलर्जीको समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । लामो समयसम्म पनि एलर्जीको उपचार हुन नसकेमा श्वास–प्रश्वासमा समस्या आउँछ, जसलाई दम भनिन्छ । विशेषगरी वायु प्रदूषणका कारण पनि दमकारोगीको संख्या वर्तमान समयमा बढिरहेको छ ।
– कामको प्रकृति
बढी मात्रामा धुलो–धुवाँ उत्पादन हुने ठाउँमा काम गर्ने मानिसमा यस्तो समस्या देखापर्ने गर्छ । श्वास–प्रश्वासका क्रममा धुलो–धुवाँ भित्र गई दम हुने गर्छ । धुलो–धुवाँ उत्पादन गर्ने कारखानामा काम गर्ने मानिसमा दमको समस्या धेरै हुने गरेको पाइएको छ ।
– मुटुरोगका कारण
मुटुरोगीमा दमको समस्या देखापर्ने गर्छ । मुटुरोगले निम्त्याएको श्वास–प्रश्वास समस्याका कारण पनि दम हुने गर्छ ।
परिवारका अग्रज कुनै पनि व्यक्तिमा दम छ वा थियो भने उमेर ढल्किँदै जाँदा वंशानुगत कारणले पनि कतिपयमा दमको समस्या देखापर्न सक्छ । यस्तो प्रकारको समस्यालाई शतप्रतिशत हटाउन सकिँदैन ।
– निरन्तर खोकी लाग्नु ।
– नाक चिलाउनु ।
– श्वास–प्रश्वासमा समस्या आउनु ।
– छाती दुख्नु ।
– श्वास–प्रश्वास असहज हुनु ।
– खोकी प्रायः राति लाग्नु ।
– श्वास फेर्दा सिटी बजेजस्तो आवाज आउनु ।
सबैभन्दा पहिले के कारणले दम भएको हो, पत्ता लगाउनु आवश्यक हुन्छ । वंशानुगत कारणबाहेक अन्य कारणले दम भएमा निरन्तर औषधि सेवन गरेर दमको उपचार गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक रूपमा गरिने कतिपय थेरापीले समेत दमलाई केही हदसम्म घटाउन सहयोग गर्छ । अत्यधिक मात्रामा तनावपूर्ण जीवनशैलीका कारण देखापरेको दमको समस्यालाई प्राकृतिक रूपमा गरिने कतिपय योगाभ्यासले समेत कम गर्न सकिन्छ ।
– वातावरण प्रदूषणबाट जोगिने ।
– बाहिर जानेवेला गुणस्तरीय मास्कको प्रयोग गर्ने ।
– चिसोबाट बच्ने ।
– फ्रिजमा राखिएका खानेकुरा नखाने ।
– एलर्जी भएमा तुरुन्त उपचारमा गराउने ।
– घरपालुवा जनावरलाई साताको एकपटक नुहाउने ।
– चुरोट, खैनीजस्ता पदार्थको सेवन नगर्ने ।
– एलर्जीको परीक्षण गराउने ।
– राति हल्का खानेकुरा मात्र खाने ।
– सुत्ने कोठामा हिटर राख्ने ।
– दमका रोगीले दूध, अण्डा, माछाजस्ता खानेकुरा कम खानु राम्रो मानिन्छ ।